Gwuo Otu Anyasị na Holly Madison Online Slots Game - 429jp.info
Maka ihe na-egbukepụ egbukepụ nke abalị na obodo ahụ, egwuregwu oghere Holly Madison na-enye ọtụtụ obi ụtọ. Emepụtara vidio vidio a na Eprel 2015, ya mere na-enye ụfọdụ atụmatụ na eserese kachasị ọhụrụ nke enwere ndị egwuregwu dị n’ịntanetị. Egwuregwu ahụ na-enye akara ngosi 5, yana ọnụọgụ nke usoro ịkwụ ụgwọ 25.
Houselọ ọnụ maka otu mgbede na oghere Holly Madison bụ 4,9%, nke a pụrụ iji tụnyere ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ dị n’ịntanetị na mobile. Kwesịrị ekwesị maka ndị egwuregwu ọhụụ, ma ọ bụ ndị egwuregwu na-ahọrọ itinye obere nzọ, enwere ike ịtọ ntọala mkpụrụ ego kacha nta maka uru nke 0.01 ebe uru kachasị enwere ike ịtọ bụ 2.00. Ndị na-egwu egwu kwesiri iburu n’uche na nzọ kacha nta bụ mkpụrụ ego 0.30 ebe nzọ kachasị na-aga dị ka mkpụrụ ego 60.
Dabere na ihe ndị a niile, mmeri kachasị nke ndị egwuregwu nwere bụ mkpụrụ ego 205,040. Enwere ọnụọgụ ego dị iche iche ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ etinyegoro, ndị egwuregwu nwekwara ike ịchọrọ ịnweta aka ha na-enweghị atụ iji mee egwuregwu.
Holly Madison Egwuregwu Egwuregwu
E nwere ọtụtụ nke daashi atụmatụ na-etolite akụkụ nke An Evening with Holly Madison, na ndị a na-nkenke kọwara ebe a.
Holly Madison na-eme dị ka akara ọhịa. Ihe ngosi a gha egosiputa oge ufodu na reels 2 na 3, na kwa n’elu 5. 5. Holly Madison ga-agbasawanye iji kpuchie ya dum, ma nye onye ọkpụkpọ ahụ nsusu ọnụ ma winkị dị ka akụkụ nke ihe nkiri ahụ.
Njirimara ọhịa aghara aghara na-apụta mgbe Holly Madison pụtara n’etiti ihuenyo egwu. Ihe nnọchianya ahụ ga – pịa mkpịsị aka ya, ma nye onye ọkpụkpọ ihe mgbakwunye 1, ma ọ bụ ikekwe 2, na – agbasawanye anụ ọhịa na eriri ahụ. Ndị na-egwu egwu amaghị mgbe nke a nwere ike ime dịka atụmatụ a niile dabara na ihu ọma ma ọ bụ ohere.
Anyasị na Holly Madison Obere Egwuregwu
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nwere ike ịdata okpukpu abụọ na Anyasị na Holly Madison, bụ nke na nke a bụ nnukwu akara ngosi lllipop dị iche iche, a ga-enye onye ọkpụkpọ ahụ otu nnwale n’efu. Nke a ga – enyere onye ọkpụkpọ ahụ aka inwe ohere ọzọ n’ịgbalị ijide egwuregwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu. Ọ bụrụ n’inwee ike inweta akara atọ achụsasị ga – apụta, ndị egwuregwu ga – enweta egwuregwu iri n’efu.
Otú ọ dị, e nwere akụkụ na-adọrọ mmasị nke atụmatụ free spins nke nwere ike ịda ụda ntakịrị ma ọ gbakwunye ntakịrị ihe dị na egwuregwu ahụ. N’oge ụfọdụ na An Evening with Holly Madison, nsusu akara nwere ike ịpụta na-esi anwụde. Ebumnuche bụ ịnwale ma chịkọta ọtụtụ egbugbere ọnụ ndị a ma ọ bụ akara akara dị ka o kwere mee. Nakọta a kacha 10 nsusu akara ga-enye gị nnukwu mmeri na free spins egwuregwu. Na mgbakwunye, ozugbo agba gburugburu 10 na-enweghị atụ, a ga-akpọrọ ndị egwuregwu iji nweta egwuregwu dị iche iche. Nke a bụ otu ntabi anya ego egwuregwu na-enye ụfọdụ ezi ohere iji merie ntabi ego na-egwu egwu.